Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay Diisambar 23, 2020 Waxaa qoray Xarunta Caafimaadka ee Harley Street
Tijaabada baarista Coronavirus ee gaarka loo leeyahay waxaa laga heli karaa dhowr Xarumo Caafimaad oo Harley Street iyo Roche SARS-CoV-2 xirmada tijaabada serology assay ayaa la heli karaa si loo iibsado
Waqtigaan kaliya dadka ku jira cisbitaalka waxaa laga baaraa coronavirus laakiin waad iibsan kartaa tijaabada Roche Covid-19.
Haddii aad leedahay calaamadaha iyo aadan hubin haddii aad qabto fayraska, sidoo kale ma laga yaabaa in aad si aad u ogaato – xitaa haddii aad u shaqeeya NHS.
Dowladda UK ayaa sheegay in in ka badan 100,000 qof ayaa ilaa hadda la baaro Coronavirus Covid 19
maamulka caafimaadka ayaa raba inuu arko 100,000 baaritaano lagu sameeyey maalintii afar todobaad gudahood.
Waxaa jira laba sababta ugu weyn ee jirrabaya dadka:
si gooni gooni ah loogu baaro iyo
in la isku dayo in la fahmo inta uu virusku ku faafay bulshada inteeda kale.
Coronavirus Imtixaanka Private ayaa loo sameyn karaa in Harley St Clinics Oo kuwanuna waxay ku siin doonaa xaqiijinta in kuwa isku arkaan kan ugu khatarta badan via Covid a 19 xirmada Baaritaanka.
The qiimaha gaarka ah Corona imtixaanka £ 350 iyo faahfaahin ku saabsan sida ay u soo iibsadaan xirmooyinka imtixaanka Coronavirus halkan hoose laga heli karaa.
Xirmada Baaritaanka waxaa posted in bukaanka ka dibna u soo celi boostada natiijooyinka ugu wacan in todobo ilaa toban maalmood iyo tan kuu sheegi doonaa haddii aad qabto Covid-19 via download xarun.
Waa maxay baaritaanka Gaarka ah ee Roche Coronavirus?
Xirmooyinka imtixaanka virus Corona gaarka loo qiimeeyo haddii aad hadda qabto fayraska.
Covid The 19 imtixaanka odhan doonaan in jirkaaga uu leeyahay unugyada gaarka ah si ay u dagaalamaan off iyo jiritaanka unugyada muujinaysaa in aad lahaa fayraska ee la soo dhaafay.
Ogaanshaha inta qof ee uu ku dhacay fayrasku waxay ka caawinaysaa mas'uuliyiinta qaabeynta faafitaankiisa. Tani waxay sidoo kale gacan ka geysan doontaa in la qiyaaso saamiga dadka ee hadda difaaca jirka leh.
baaritaanka joogtada ah iyo baahsan waa tallaabo muhiim u ah hoos u dillaacay iyo maaraynta Coronavirus ku faafa.
Baaritaanku in isticmaalka adeegga caafimaad oo waxaa bixiya mid ka mid ah shaybaarada baaritaanka ugu weyn caalamka oo rikoor track aad u sumcad.
Baaritaanku waa baaritaan guddi oo kala doonaa dhexeeya fayraska halista ah Covid-19 iyo 11 fayrusyada kale ee aan halis la calaamado la mid ah.
Mar walba, bukaanka waa in taageero buuxda clinical kaas oo dusha kala Harley St Clinic ah.
Marka baaritaanka ayaa lagu amray, xirmada baaritaanka fayruska Corona lagu dhajiyaa bukaanka guriga ama cinwaanka doorbidayso.
Tijaabada tijaabada waxaa lagu ridayaa sanduuqa la siiyay oo dib ayaa loogu dhejiyaa sida ku xusan tilmaamaha.
Haddii saamiga baaritaanka wax lagaa helo, waayo Covid-19-talinta post markaas buuxa imtixaanka diyaar u noqon doono qofka bukaanka ah.
Natiijooyinka baaritaanka waa in sida caadiga ah la heli karo gudahood 7 maalmood.
Positive Covid-19 natiijooyinka lala wadaagi doonaa ah NHS sidaas kiisaska in si fiican loo hayn karo sida ay tahay cudur lays.
Fadlan isticmaal foomka xiriirka hoose wixii macluumaad dheeraad ah.
Filed Under: CoronaVirus Testing Tagged With: Corona Virus Tests, Covid19 Tests, Coronavirus Imtixaanka Private